विदेशबाट रमाउँदै आफ्नै भूमिमा, ‘कम्पनीले छुट्टी मिल्दैन भन्यो, मैले ‘क्यान्सिल’ हानेर आएँ’ – Hot Post News
काठमाण्डौ – न गर्मी, न जाडोको मौसम । खुलेको आकाश । दशैँको शुभकामना लेखिएका विज्ञापन । त्रिभुवन विमानस्थलमा मान्छेको बाक्लो आउजाउ छ। कोही जहाज चढ्दै छन् भने कोही ओर्लिंदै छन् । जहाजबाट ओर्लनेहरु ट्रली गुडा उँदै ट्याक्सी भएतिर जाँदैछन् । यसैगरी ट्रली गुडाउँदै हुनुहुन्छ, सर्लाही इश्वरपुरका कमल पुडासैनी मगर पनि ।
हँसिलो अनुहार, कसैलाई देख्न हतारिएका आँखा । उहाँका नजर टक्क गएर विमानस्थल बाहिर उभिरहेकी एक महिलामा अडिए । उहाँ मुस्कुराउँदै उतैतिर जानुभयो । केहीबेर दुवै जनाले एकअर्कालाई हेरिरहे । निकै भावुक बने । दुवैको अनुहार खुशीले पुलकित भयो । धेरैपछि विदेशबाट फर्किएका श्रीमानलाई देखेर सुरुमा लजाउनुभयो मनिता कुमारी पुर्वाछाने । अनि कुरा सुरु गर्नुभयो, ‘आरामैसँग आइपुग्नुभयो नि ?’
कमल फिस्स हाँस्नुभयो । हाँसेरै जवाफ दिनुभयो, ‘अँ, आरामैसँग पुगेँ नि ।’ सन् २०१० मा कतार गएका कमल यसअघि तीन वर्ष पहिले आउनुभएको थियो घर । त्यतिबेला केही दिन बसेर फेरि कतार उड्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समयदेखि कतारमा काम गर्दै आएका कमललाई घरको न्यास्रोले सताइ रहन्थ्यो । कतार गएको यति लामो समयमा उहाँले दुई पटक मात्र घरमा दशैँ मनाउन पाउनु भयो ।
‘यसपालिको दशैँ त घरमै मनाउँछु भनेर आएको’, उहाँले भन्नुभयो, ‘घरमै दशैँ मनाएजस्तो कहाँ हुन्छ र विदेशमा!’ धेरै वर्ष श्रीमानबिना नै दशैँ मनाउनुभयो मनिताले पनि । तर यसपटक श्रीमान् साथमै हुनुहुन्छ । उहाँ निकै खुशी देखिनुहुन्छ । खुशीले मनिताको मन ढकमक्क फुलेको छ । धेरै वर्षपछि श्रीमानसँगै दशैँ मनाउन पाउँदा कसको मन फुल्दैन र ?
वैदेशिक रोजगारीबाट दशैँमा घर फर्किन नपाएकाहरुका श्रीमतीलाई कस्तो लाग्दो होला ? कति खल्लो हुन्छ होला दशैँ ?आखिर जसले पीडा भोगेको हुन्छ, सुखको अनुभूति पनि उसैले लिन्छ । त्यही भएर त यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ छ मनितासँग । ‘उहाँ नहुँदा त कस्तो खल्लो खल्लो लाग्थ्यो दशैँ’, श्रीमानतिर हेर्दै भन्नुभयो, ‘योपालि त धेरै नै रमाइलो हुने भयो ।’
‘दशैँकै लागि काम छाडेर घर आएँ’ : सन् २०१० मा कतार गएदेखि कमल एउटै कम्पनीमा काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ टेकफ्यान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा अफिस ब्वाइको काम गर्नुहुन्छ। महिनाको ५० हजार रुपैयाँ जति कमाइ हुन्छ ।तीन वर्षदेखि घर आउन पाउनुभएको थिएन । त्यसमाथि घरमा दशैँ नमनाएको त चार/पाँच वर्ष भइसकेको थियो ।
त्यही भएर यस पटक दशैँ पनि मनाउने भनेर घर आउन खोज्नुभयो । तर कम्पनीले बिदा दिएन । मनै त हो नि ! धनभन्दा मन ठूलो भन्छन् । दशैँमा घर जाने कमलको मनको अगाडि कम्पनीको केही लागेन । ‘बिदा नदिए पनि म त जान्छु भनेर आएको नि’, उहाँले भन्नभयो, ‘छुट्टी मिल्दैन भन्यो, मैले क्यान्सिल हानेर आएँ ।’ देशको माया, परिवारको माया र मुखैमा आएको दशैँको मायाको अगाडि विदेशको जागिरको केही चलेन ।
दश वर्ष देखि काम गर्दै आएको जागिर दशैँको लागि भनेर चटक्कै छोडेर आउनु भयो । अब कम्पनीले बोलाएर भिसा पठायो भने जाने नभए नजाने सोच्नु भएको छ । ‘आफ्नो देश भन्या आफ्नै देश हो नि’, उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘पैसा धेरै कुरा हो तर पैसाकै लागि देश र परिवारको माया मार्न त भएन नि ।’ यो समाचार उज्यालो अनलाईनमा बेदानन्द जाेशीले लेख्नुभएको छ ।
Prevसुत्नुभन्दा पहिला उमालेर खाने गर्नुहाेस् केरा, केहि दिनमै देखिनेछ चमत्कार !
Nextयिनै हुन् बानेश्वरका डिएसपी दुर्गाराज रेग्मी जस्ले ठुलो माछा ‘महरा’ लाइ समात्न बालुवाटारमा पसे (हेर्नुहोस भिडियो)